राष्ट्रपति गेटमा बिरोध:तीन प्रदर्शनकारी प्रहरीलाई भारी ! « The News Nepal
राष्ट्रपति गेटमा बिरोध:तीन प्रदर्शनकारी प्रहरीलाई भारी !
काठमाडौं। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास अगाडि युवाहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको छ ।निर्मला पन्तको न्यायका लागि दवाव दिन युवाहरू ब्यानरसहित नाराबाजीमा उत्रिएका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि प्रदर्शन भैरहँदा त्यहाँ उपस्थित प्रहरीले हस्तक्षेप गरेनन्। तर उनीहरूले थप बल मगाएपछि १० मिनेटमा आएको प्रहरी टोलीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्यो। सडकमै सुतेका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले उचालेर सडक किनारातर्फ लगेको थियो। पछि उनीहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय अगाडिको प्रदर्शन, प्रहरीले गरेको बल प्रयोग र महिला प्रहरी नहुँदा तीन महिला प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति कार्यालयकै गेटमा लामो समयसम्म चर्काएको नाराबाजी हेर्नेका लागि पनि निकै रोचक बन्यो।हेर्नुस् डिसी नेपालका लागि अमृत मौडेलले तयार पारेको यो स्थलगत भिडियो समग्रीः